हाकाता क्रिसमस मार्केट २०१८ | Feel Fukuoka Japan
नोबेम्म्बर महिनाको हैलोवीन पछि, क्रिसमस आउने गर्दछ । 。
तपाइले फुकुओका शहरको यस समयमा वर्ष भित्रकै एक बहुमुल्य हप्ताको रूपमा क्रिसमसको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ । यस शहरको अत्यन्तै प्रख्यात स्थल अगाडिको एक सानो दायरा भित्रपनि धेरै सुन्दर क्रिसमस बजार आयोजित भइरहेको छ ।
पेटी र स्टोरहरुमा बत्तीको झिलिमिलीले सजाई, पूर्ण रुपले चाँदी रंगको पानि परेकोझैँ देखिन्छ । स्टेसनको प्रतीकको रुपमा गुमौरो छतको तल राखिएको ठूलो ताराको आकृतिको सपना जस्तै क्रिसमस बजारको रात्री कालिन मनोरंजन लिन सकिन्छ ।
यस वर्ष (हिकारिको नो माची ) भनि सेतो, निलो, पनि रंगको शानदार बत्तिको झिलिमिलीहरुले रुखको हागा र पातहरुको छेउछाउमा साथिभाइहरु सग खुशीको साथ घुम्न, आफ्नो प्रेम प्रेमिका सगको रमाइलो समय बिताउन मानिसहरुको भिड लाग्ने गर्दछ । झिलिमिली हेर्दा मात्र पनि रमाइलो समय बिताउन सकिन्छ । केन्द्रमा रहेको सुरुचिपूर्ण टावर चाहि (Elvis राज्यको Lord of the Rings) को महारात लाइ मानिन्छ ।
यहाँ झिलिमिलीको वरपर स्टलहरु रहेको छ । स्टेज लाई केन्द्र पारि लगभग ४० वटा स्टलहरु राखिएको छ । खाने र पिउनका लागि धेरै सीटहरूको प्रबंन्ध पनि गरिएको छ । म बेलायत बाट आएको हुनाले मेरो लागि अचम्मको कुरा थियो । बजारमा लन्डनको मानिसहरु अलि धेरै भएकाले जाडोको समयमा उठेर खानु पर्ने हन्छ ! बिशेष युरुपको क्रिसमस लाइ माया गर्नुहुने सबै जानालाई हाकाताको क्रिसमस गेट हेर्न जानुहुन अनुरोध गर्दछु ।
Pancakes, pies, hotdogs, cheese steaks तथा German sausages, शरीरलाई न्यानो बनाउने खानेकुरा, हट चकलेट, सुप, बिभिना स्थानको बियर (जर्मनको ससेज सग मिल्ने जर्मनको बियर) पनि रहेको छ । साथै वाइन, खानेकुरामा मिल्ने पिय पदार्थ पनि धेरै रहेको छ । बिशेष गरि Glűh वाइनको सिफारिस गर्न चाहान्छु । १००० येनमा मिठो मधिराको साथ कप पनि पाइन्छ! खरिद गर्दा घर लगेर जानको लागि झोला लिन नबिर्सनुहोस् । (मैले पनि तेही गरेको थियो )
जलपानको भरिपुर्ण मनोरंजन पश्चात, शिल्प तथा कलाको दोकानहरु हेर्दा पनि राम्म्रो हन्छ । नाम अनुसारको (बिदेशको कोशेली) को अर्थ मानिने “Gifts From Afar” नामक दोकान पनि रहेको छ ।
दोकानमा कोशेली लिएर जानको लागि ठिक हुने पोल्यान्ड ब्रान्डको सामन सिसाको आकृतिको मैन्बती र हस्तकलाको सामानहरू बेचिरहेको छ । पसलमा त्यहाँ न्यानो र उदासिन क्रिसमसको चम्कने वस्तुहरु भैई बहारी दुनियाको किनमेलको अनुभूति गराउछ । अरु विभिन्न क्रिसमसको लागि किनमेल गर्न चाहानु हन्छ भने Belle Epoque को तेल बाट बनेको चित्र रहेको छ । जुन ठूलो सानो दुवै रहेको छ ।(अत्यन्तै राम्रो चित्र थियो अब्सोसको कुरा फोटो खिच्न मनाही छ । )
क्रिसमस बजारको केन्द्रमा कार्यक्रम स्थल रहेको छ । बिदाको समयमा १२:३० बजे बाट र अरुबर भने १७:३० बजेबाट प्रत्यक्ष सांगीतिक कार्यकर्मको मनोरंजन लिन सकिन्छ । समय तालिका चाहि website मार्फत चेक गर्न सक्नुहुन्छ । विभिन्न शैलीमा रहने छ । म गएको समयमा Chicken Nuggets भन्ने ब्यान्डले प्रस्तुति गरेको थियो । कार्यक्रम समाप्ति पछि अटोग्राफ लीन मौका पायो, उहाहरु सारैनै दयालु थिए ।
क्रिसमसमा घर फर्कन नसक्नुहुने महानुभावहरुलाई, हाकाता क्रिसमस बजारको माहोलले त्यस एक्लोपनको पिडा लाइ हटाइदिन्छ । साथीभाईहरु साग वाइन पिउदै (म्यारी क्रिसमस !) भनिमनोरंजन गर्नुहोस！
हकाता क्रिसमस मार्केट
डिसेम्बर २५ तारिक सम्म प्रत्यक दिन सन्चालन हुने,
सोमबार . बिहिबार १७ बजे देखि २३ बजे सम्म /शुक्रबार १७ बजे बाट २३:३० /आइतबार. छुट्टीको दिन १२ बजे बाट २३सम्म
यसपटक फ़ुकुओकाको उत्तरी भेगमा अवस्थित फ़ुकुओकाको दोस्रो ठूलो शहर कित